Jun 20, 2019 1 min read Drama
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကြာမ္မာဆိုးက ထိုနေ့က စခဲ့တာလို့ဆိုလို့ရတယ်။
သေဆုံးနေတဲ့ ရင်သွေးငယ်ရဲ့အသက်မရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို သူတို့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ စိုက်ကြည့်နေကြတယ်။
ရင်ထဲက အပူမီးတွေက သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာ ထင်ဟပ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတဲ့ သူတို့နှစ်ဦး အမှန်တရားကို လက်မခံချင်ပဲ လက်ခံရတာပေါ့။
ထိုနေ့က သူတို့ရဲ့ရိုးသားမှုတွေ တိတ်ဆိတ်စွာ ပျောက်ဆုံးလာစေမည့် နေ့တစ်နေ့။
Scotland ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် မြူနှင်းမှုန်တွေ ဝေဆိုင်း နေတယ်။
ဒါပေမဲ့ထို မနက်ခင်းမှာပဲ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျည်းတန်သောပုံရိပ်တွေကြောင့် ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့နှင်းမှုန်များသည် စစ်သည်တော်တွေရဲ့ဓားသွားများမှ သွေးစက်တွေနှင့် ရောနှောကာ ဖြူစင်သော အဖြူရောင်များမှ သွေးစွန်းသော အနီရောင်များအဖြစ် အရောင်ပြောင်းကုန်ကြလေတော့သည်။
ထိုစစ်ပွဲတွင် သူ ဦးစီးသော King Duncan ရဲ့ဘုရင့်တပ်သားများဘက်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့သော်လည်း ကျဆုံးခဲ့ကြသော လူငယ်တပ်သားများရဲ့အရေအတွက်ကား မနည်းလှပေ။ ကံဆိုးခြင်းလား ကံကောင်းခြင်းလားတော့ မသဲကွဲ။ ထိုနေ့မှာပင် သူ့ကို ဘုရင် ဖြစ်မယ်လို့နမိတ်ဖတ်ခဲ့သည်။ သူတင်ပဲလား။ မဟုတ်ပါ။ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ တိုက်ပွဲဝင်ဖော်ဝင်ဖက် Banquo ကိုလည်း ဘုရင်များရဲ့ဖခင်ဖြစ်မည်ဟု နမိတ်ဖတ်ခံခဲ့ရသည်။
သြော် … နမိတ်တွေ … နမိတ်တွေ … လူသားတွေကို အမှောင်ကမ္ဘာထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားကြတဲ့ နမိတ်တွေ..
ထိုထိုသော နမိတ်တွေကြောင့် လူကောင်းတစ်ချို့လူဆိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ လူတစ်ချို့အသက်တွေ ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်။
ထိုတိုက်ပွဲကြီးရဲ့နိဂုံးမှ အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသော သူတို့သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးတို့ရဲ့ဘဝသည် ထိုအိမ်အပြန်လမ်းမှာတင် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
အလိုအင်ဆန္ဒ အာသီသ ပြင်းပြသော မိန်းမ
မကြံကောင်း မစည်ရာ မကြံစည်ဝံ့သော အရာကို ကြံစည်၍ မိမိရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းသော မိန်းမ
သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းကို နမိတ်ပုံထဲကလို ဘုရင်ဖြစ်အောင် မကောင်းသော အကြံတွေကို ကြံစည်ပြီလေ။
ထိုနေ့ညက ဘုရင်ဖြစ်သူ King Duncan သူတို့ရွာကို တိုင်းခန်းလှည့်လည်သည်။ သောက်စားမူးယစ်ပျော်ပါးပြီး စိုးရိမ်ခြင်းကင်းမဲ့စွာဖြင့် ထိုဘုရင်ဖြစ်သူ အိပ်စက်လေပြီ။ ထိုအချိန်သည် သူတို့အတွက် အကြံအစည်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်။
အမှောင်ထုက ညကို ကြီးစိုးထားသည်။ ကောင်းကင်မှ မိုးရေတွေက သည်းမဲစွာရွာချ၍ သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အကုသိုလ်လုပ်ရပ်ကို အောင်မြင်အောင် ကူညီတွန်းပို့ပေးနေသယောင်။ အမှောင်ဆုံးသော ထိုညရဲ့မိုးရေစက်တွေကြားမှာ ဓားတစ်ချောင်းကို ကိုင်ကာ ဘုရင်အိပ်စက်နေသော တဲတော်ထဲသို့သူ ဆိုသော Macbeth ဝင်ရောက်သွားလေတော့သည်။
Director Justin Kurzel ရဲ့ဒုတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ Australian ရုပ်ရှင် ဖြစ်ရပ်မှန် Snowtown ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပြီး ယခုအခါ William Shakespeare ရဲ့အအောင်မြင်ခဲ့ဆုံးပြဇာတ်များထဲမှ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Tragedy of Macbeth ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းလိုက်သည်။ ယနေ့ခေတ်ရဲ့အနုပညာပါရမီအမြင့်မားဆုံး သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Michael Fassbender နဲ့ Marion Cotillard တို့က Macbeth နဲ့ Lady Macbeth တို့အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဇာတ်ရံများအဖြစ် Paddy Considine, Sean Harris, Jack Reynor, Elizabeth Debicki နဲ့ David Thewlis တို့ပါဝင်ထားပါတယ်။
Technical ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ များများစားစား မသုံးထားပဲ လူအင်အားကိုပင် သိသာစွာ လျော့သုံးထားသည်ကို မြင်တွေ့ခြင်းအားဖြင့် Limited Budget ဖြစ်တဲ့ ယခုရုပ်ရှင်သည် 20 Million Budget ခန့်သာ အသုံးပြုထားပေမဲ့ ထို Limited Budget ကို အကာအကွယ်ပြုပေးခဲ့တာက ....
လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ကြီးမားကျယ်ပြန့်လှတဲ့ Landscape Shots တွေနဲ့....
ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို အသက်ဝင်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့စိတ်ကို ထိတ်လန့်ခြင်းတွေ မသိမသာ ဆောင်ကျဉ်းလာတဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း နောက်ခံ Scores ကြီးတွေရယ် ....
ပြောင်မြောက်လှတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရဲ့မြင့်မားလွန်းတဲ့ ပြဇာတ်ဆန်ဆန် စကားလုံးအသုံးအနှုန်း အပြောအဆိုတွေရယ် .....
သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့Powerful ဖြစ်လွန်းတဲ့ Strong Performances တွေ အကုန်လုံး စုပေါင်းထားတဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အနူပညာ တင်ပြချက်တွေပဲ။
ဒီဇာတ်ကားကို Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပြသခဲ့တော့ ဇာတ်ကားရဲ့အဆုံးမှာ 10 Minutes ကျော်ခန့် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေအကုန် မတ်တပ်ထရပ်ပြီး လက်ခုပ်တီးအားပေးခဲ့ကြတယ်။
“What done cannot be undone.”
ဇာတ်ကားထဲတွင် Lady Macbeth အသုံးများခဲ့သော စကားတစ်ခွန်း။ မှန်တာတော့မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နားထောင်သူကို အတွေး ၂ မျိုးပေးစေတယ်။
၁။ သင်သည်အတိတ်တွင် အပြစ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုအပြစ်တွေကို နောင်တရ၍ ငိုမကြွေးသင့်တော့။ အတိတ်သည် ပြန်လည်ပြုပြင်၍ မရတော့ပေ။ ကျန်ရှိနေသော နောင်လာမဲ့ အနာဂတ်ကိုသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လူကောင်းဖြစ်အောင် ကြိူစားနေတော့ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတွေး တစ်ခု။
၂။ သင်သည် အတိတ်တွင် အပြစ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ထိုအပြစ်တွေကို နောင်တရ၍ ငိုမကြွေးနေသင့်ပေ။ ပြန်ပြင်၍ မရေသော အတိတ်တွေကို ပြန်လည်တွေးတော့နေမည့် အစား လုပ်လက်စ ဒုစရိုက်အမှုကို ပြီးဆုံးအောင်မြင်သည်အထိ ဆက်လုပ်၍ လုပ်ဆောင်သွားရန် တိုက်တွန်းခြင်း။ ငါ့မြင်းင့ါစိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက်။ လုပ်လက်စနဲ့မထူးတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အတွေးတစ်ခု။
Lady Macbeth ပြောခဲ့တာကတော့ ဒုတိယ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါ။
အဓိက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာက သင့်ရဲ့အကုသိုလ် ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုကို ဆက်လက် ကာကွယ်ဖို့နောက်ထပ် ဒုစရိုက်မှုတွေ ထပ်မံ၍ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေမှာလား? လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့စိတ်က ပြတ်သားရဲ့လား? ပြတ်သားတယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့နှောင့်ယှက်မှု ဒဏ်ကို မည်မျှကာလကြာရှည်စွာ သင်ခံနိုင်ရည်ရှိမှာသလဲ ဆိုတာပဲ။
နမိတ်သည် အစွဲဖြစ်လာသည်။ ထိုအစွဲမှသည် လောဘအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပစ်ကာ သူတို့ရဲ့ ရိုးသားခြင်း အပြစ်ကင်းစင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။ အကုသိုလ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်စေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အကုသိုလ်ဆိုသည့်အတိုင်း တစ်ခုတည်းနှင့် အမြဲတမ်းရပ်တန့်မနေ။ အကုသိုလ်သည် အစွဲအလန်းတစ်ခုပမာ နောက်ထပ် ပြစ်မှုများကို ကျူးလွန်စေရန် အားပေးသည်။ သို့နှင့် လူကောင်းများသည် လူဆိုးများဖြစ်လာကြရပေတော့သည်။
ဝမ်းနည်းမှုတွေကနေ ရူးသွပ်မှုတွေ ဖြစ်စေတော့သည်။
“Life's butawalking shadow. Honor. Love. Friends. But in there's death. Curses.”
Rotten Tomatoes Rating: 79% (Currently)
P.S “The Tragedy of Macbeth” ပြဇာတ်ကို William Shakespeare က 1599 နဲ့1606 ခုနှစ်တွေကြားမှာ ရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
Jan 20, 2021 1 min read DramaComedy
Dec 6, 2020 1 min read Drama
Nov 26, 2020 1 min read Drama